ICavan House-ubunewunewu beenkwenkwezi ezi-5 kwindlu yasefama - I-Airbnb
ICavan House-ubunewunewu beenkwenkwezi ezi-5 kwindlu yasefama
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJill & Robert
Indlu entle yasefama yelizwe, iCavan House ibekwe emazantsi eeNtaba zeMorne kwaye kufutshane neCo Down Coast.
Le ndlu intle ye-NITB 5* yeNkwenkwezi yokuziphakela yelizwe ibonelela ngesiseko esigqwesileyo sosapho olugqibeleleyo okanye ikhefu leshishini elisemaphandleni.
Indlu entle yasefama yelizwe eyakhiwe ngo-1841, iCavan House ibekwe ngaphandle nje kwedolophu eqhelekileyo yaseRathfriland, emazantsi eeNtaba zeMorne; iNdawo yobuhle beNdalo obuBalaseleyo.
Ihlaziywe ngokupheleleyo kule minyaka yakutsha nje, eli khaya losapho lwaseGeorgia libonelela ngendawo yokuhlala ethe kratya enendawo yokuhlala enendawo yasemaphandleni, igadi enkulu yabucala kunye nembono entle phezu kweeNtaba zeMorne, iSlieve Gullion kunye neSlieve Croob.
Ixhamla kuzo zonke iimpawu zangoku ngaphandle kokulahlekelwa ngumtsalane wendlu yasefama. Kukho igumbi elikhulu lokuhlala elinobunewunewu elinomlilo ovulekileyo, ifenitshala yakudala, iTV yescreen esisicaba kunye nesidlali seDVD, esilungele ukuphumla neenyawo zakho phezulu.
Ikhitshi lemveli, eligcwele isitofu se-Aga lilungele ukupheka kwaye ukonwabele imveliso yasekhaya kunye nosapho kunye nabahlobo. Igumbi lokutyela elikhulu elineengcango zaseFransi eziya kwipatio yabucala yeyona ndawo ifanelekileyo yokubhiyozela iminyhadala ekhethekileyo nokuba iphambi kwesitovu selog okanye ibarbeque evuthayo ngaphandle.
Kukho amagumbi okulala amane amemayo. Igumbi lokuhlambela elikhulu linebhafu eqengqelekayo, ishawari yekona kwaye yindawo efanelekileyo yokuphumla emva kosuku oluxakekileyo.
4.93 · Izimvo eziyi-62
Eli khaya lihle kakhulu libonelela ngenye indlela yokuphumla kwindawo ephithizelayo yedolophu kunye nemvelaphi enoxolo kunye nokufikelela ngokulula kwiindawo ezinomtsalane zabakhenkethi kunye nezinto eziluncedo.
Umbuki zindwendwe ngu- Jill & Robert
Njengomamkeli wakho ndiza kube ndilapho ukuze ndidibane nawe ndikubulise ekufikeni kwakho eCavan House, kwaye ndiyafumaneka ukuba ndingafowunela nangaliphi na ixesha lotyelelo lwakho. Uyakwamkeleka kakhulu kwikhaya lethu langaphambili kwaye siyathemba ukuba uyakukonwabela ukuhlala kwakho. Uya kufumana ipakethe yokutya eyamkelekileyo xa ufika kwaye iinkonzo ezongezelelweyo zokucoca ziyafumaneka ngexesha lokuhlala kwakho @ £10 ngeyure ukuba unqwenela ukufumaneka.
Njengomamkeli wakho ndiza kube ndilapho ukuze ndidibane nawe ndikubulise ekufikeni kwakho eCavan House, kwaye ndiyafumaneka ukuba ndingafowunela nangaliphi na ixesha lotyelelo lwak…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Rathfriland